Cheap nokuchengetedza zvikamu nendarira fekitari uye bhizimisi | Ouzhan
Brass isiri-simbi simbi yekuchengetedza-yakagadzirirwa chaiyo ndarira yekugezwa zvikamu
Iyo tsvuku punching maitiro ndeye epamberi nyanzvi maitiro ayo achangobva kugadzirwa pahwaro hwemazuva ano ekugadzira uye kupisa extrusion. Nekufambira mberi kwenzanga nekusimudzira kwesainzi uye tekinoroji, iyo indasitiri yemuchina yakaisa kumberi masimba echimagetsi anodikanwa kune zvikamu zvemishini. Mashandiro ekushandisa anosanganisira kukanganwira ndege, injini dzedhiziri, kukanganwirwa, kukanganwirwa munzvimbo dzakasiyana, kukanganwirwa kwegungwa, kukanganwirwa zvombo, petrochemicals, kukanganwira kwemigodhi, simba renyukireya kukanganwira.
Zvakanakira kuumba ndarira isiri-simbi simbi
- Vandudza michina simba
- Yakanaka mapurasitiki pakamuri tembiricha uye yakanyanya tembiricha
- Yakapeterera yekuchengetedza tembiricha renji; yakanaka yekupisa conductivity
Brass yekuchengetedza yekugadzirisa musimboti
1. Paradza chimiro chakakora chekukanda, chiite chibage chakatsetseka, uye pusha maburi madiki mune isina chinhu (simbisa padyo) kugadzirisa michina zvimiro nezera.
2. Kugadzira iyo isina chinhu mune akasiyana maumbirwo echigadzirwa nesimbi mitsetse.
OEM yakagadziriswa yendarira isiri-simbi simbi yekuchengetedza sevhisi-China Shanghai ndarira isiri-ferrous simbi yekugadzira zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Iyo yepamusoro-chaiyo yendarira yekuchengetedza ine yakagadzikana uye yakavimbika mhando inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuve nechokwadi chakakwana kugadzira kwendarira yekugadzira michina zvikamu. Uye zvakare, iyo yendarira yekugadzira zvigadzirwa yakapihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa inokwikwidzana mutengo masevhisi endarira yekuchengetedza zvikamu kune edu akakosha vatengi.
Ndezvipi zvinoshandiswa zveakagadzira zvikamu zvendarira
Ndarira inowanzo shandiswa kugadzira mavhavha, mapaipi emvura, mapaipi ekubatanidza emukati uye ekunze maekisesaizi emhepo, uye ma radiator.
Zvakanakira Ouzhan Brass Kuchengeta Service
- Zvese zvakaringana ndarira yekugadzira zvigadzirwa zvinoenderana neyakaomarara mhando kuongororwa.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli kugadzira chaiyo ndarira yekugadzira zvikamu.
Pashure: CNC kutendeuka epurasitiki
Zvadaro: OEM simbi isina simbi yekushandura zvikamu maitiro